ORACLE (teletext) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖိုင်:Itn oracle 1989a.jpg
ပရိုဂရမ် (မှ"အိုptional Reception၏ အnnouncements အားဖြင့် Coded ဌစာမျက်နှာများ အီးlectronics")ခဲ့တဲ့စီးပွား teletext ပထမဦးဆုံးဝန်ဆောင်မှုအသံလွှင့်အပေါ် ဂျပန်နိုင်ငံ ကွန်ယက်အတွက်အလယ်နှောင်းပိုင်း ၁၉၇၀ နောက်ပိုင်းတွင်ပေါ် ၄ ရုပ်သံလိုင်း တွင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊နောက်ဆုံးတော့အဆုံးသတ်နှစ်ဦးစလုံးအပေါ်ချန်နယ်မှာ ၂၃:၅၉ ဒိနိတ်အ ပေါ် ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၂။
၂.၁ ရုပ်သံလိုင်း ၄
ဒါကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်အားဖြင့်စတင်ဖြန့်တဲ့ပူးေပါင္းကျောထောက်နောက်ခံဖြင့် လွတ်လပ်သောအသံလွှင့်ဏာ အကြောင်းမှာတူညီသောအချိန်အဖြစ် ဘီဘီစီျဖစ္ေစႏိုင္သည္ Ceefax ။ များကင်းမဲ့မှုကြောင့်ရရှိနိုင်သောအသံဖမ်း၊အတိအကျကိုဖွင်ရက်စွဲများပြီဘယ်ဘက်ထင်ရှား။ လက်ခံဖြစ်လာပတ်ပတ်လည်လူကြိုက် ၁၉၈၀။
ဗြိတိန်မှာပရိုဂရမ်၊ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ teletext ဝန်ဆောင်မှုစတင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်အဖြစ်အသစ်ကြော်ငြာခြင်းအလတ်စားအပေါ် ၁ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၁ တူ ၁၈၀၊၀၀၀ teletext စုံတိုင်းပြည်အတွက်။ အားဖြင့်အောက်ပါအနှစ်တုန်းတော့ ၄၅၀၊၀၀၀ စုံဗြိတိန်တွင်ရေကြီးစီမံကိန်းမှထသုံးသန်းနီးပါးရဲ့အဆုံးမှာ ၁၉၈၅ နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချဟောကြော်ငြာ၏ငွေကဲ့သို့မြင့်ဒၚလာ ၉၀ သန္း(£၅၀ သန်း)။
ပရိုဂရမ်ကွာပြောင်းရွှေ့ခံရမှစမ်းသပ်ရေးအကောင်အင်ဂျင်နီယာဌာနနှင့်ဆီသို့ဦးတည်ပိုပြီးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအရာပံ့ပိုးပေး။ အောက်တွင်မူရင်းအစီအစဉ်ကိုဂျပန်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်သက်တမ်း၊သူတို့ခဲ့ကြဖှဲ့၏အဆုံးတွင် ၁၉၉၂ နှင့်အနည်းငယ် ကိုစကင်ဖတ်လိုင်းများကို သူတို့အသုံးပြုပေးထားတဲ့အမြင့်ဆုံး bidder။ ပရိုဂရမ်အောင်မြင်စွာယှဉ်ပြိုင်သည်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်များအတွက် teletext ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်ရုပ်သံလိုင်း ၄၊သာမှသူတို့ကိုယ်သူတို့ရှာတွေ့ outbid အားဖြင့် Teletext တက္၊ အမူလကဖွဲ့စည်း ဆက်စပ်သတင်းစာ၊ Koninklijke ဂ်င္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား N။ ငယ္ မီဒီယာလုပ်ငန်းများအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊အဘယ်သူစတင်လွှင့်မှာသန်းခေါင်တွင် ၁၉၉၃။
အမျိုးမျိုးသောအချိန်များတွင်ထိုနေ့၏ပရိုဂရမ်စာမျက်နှာရာက္လာျရူပါရုံ၌ဆိုသော်ငြားလည်းအပေါ်အများအားဖြင့် ရုပ်သံလိုင်း ၄၊ဖြစ်သော်လည်းရံဖန်ရံခါစာမျက်နှာများတွင်ပြသခဲ့ကြသည်ညဉ့်နေစဉ်အတွင်းအပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံ။
ပြကြား ၁၉၈၃ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၇၊၄-ဖုန္းအပေါ်အမြင်ခဲ့တဲ့မဂ္ဂဇင်းကည့္ဒီႀကီးခ်ဲနေ့ ၄ ရုပ်သံလိုင်းရဲ့မိန့်ခွန်းအဖြစ်ပြန်အတက်အချက်အလက်များနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များ၊ထိုကဲ့သို့သောစွန့်စားတစ်ဦးခွေးခေါ် ၄-T။ မှ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစတင်၏နံနက်စာရုပ်သံဧပြီလအတွက် ၁၉၈၉၊၄-ဖုန္းမဂ္ဂဇင်းပြေးများအတွက် ၁၅ မိနစ်နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲခဲ့သည်။ အောက်ပါအစ၏နံနက်စာရုပ်သံ၊သို့သော်၊၄-ဖုန္းအပေါ်အမြင်ပြသခဲ့သည်အတွက်တစ်ခုတည်းလုပ်ကွက်အစမီ။ ပင်သော်လည်းပရိုဂရမ်ပျောက်၎င်း၏ဂိမ်းအပေါ် ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၂၊၄-ဖုန္းအပေါ်ကြည့်ရှုရန်ဆက်လက်ပြသနှင့် ၁ ကနေဇန်နဝါရီ ၁၉၉၃ အထိ ၄ ရုပ်သံလိုင်းစတင် ၂၄-နာရီအသံလွှင့်အတွက်ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၇၊၄-ဖုန္းအပေါ်အမြင်ပြသခဲ့သည်တစ်လျှောက်လုံး ၄ ရုပ်သံလိုင်းရဲ့တစ်ခုလုံးကို closedown ကာလ။
ကြား ၁၉၈၃ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၈၉၊၄ ရုပ်သံလိုင်းထုတ်လွှင့်စာမျက်နှာများမှအဆိုပါပရိုဂရမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေါ်မှာလေ။ ပြထားတဲ့အတွက် ၁၅ မိနစ်အကူ၊နှင့်အပြောင်းနှင့်အတူ ၄-ဖုန္းအပေါ်အမြင်နှင့် showings အ ETP-၁ testcard၊အခုမွအတွင်းနေ့အခါရုပ်သံလိုင်း ၄ မဟုတ်ခဲ့လွှင့်မှန်တကယ်ခင္း။ အစပိုင်းတွင်၊ထိုစာမျက်နှာများတွင်ပြသ၍နေ၏တဦးတည်းရှုထောင့်ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူအကြောင်းအရာကိစ္စပြောင်းလဲနေတဲ့အသီးအထို့ကြောင့်မကြာခဏ။ စက်တင်ဘာလအတွက် ၁၉၈၇၊ပရိုဂရမ်အပေါ်အမြင်ဖြစ်လာတဲ့ဝန်ဆောင်မှု၊ချမှတ်ဤပုံစံတချိန်တည်းမှာကြောင်းရုပ်သံလိုင်း ၄ တိုးခ်ဲလွှင့်နာရီကိုလွှဲပြောင်း ရွန်းကျောင်း မှရုပ်သံလိုင်း ၄။ ပရိုဂရမ်အပေါ်အမြင်ကိုအဆုံးသတ်သည့်အခါ ၄ ရုပ်သံလိုင်းစတင်ထုတ်လွှင့်နံနက်စာ။
အစဉ် ၁၉၈၀ ခုနှစ်များနှောင်းပိုင်းနှင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအစောပိုင်း၊အများအပြားဂျပန်နိုင်ငံကုမ္ပဏီထုတ်လွှင့်အလုပ္မ်ားအလုပ္နှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အတြင္းညကာလနှင့်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ခဲ့သည်အားဖြင့်လွှင့်သက်ဆိုင်ရာပရိုဂရမ်စာမျက်နှာတွင်ရှုမြင်။ ဟို ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီဤအမှုကို၊အစဧပြီလအတွက် ၁၉၈၆၊အတူ ယ တွင်းဝတ်စုံအောက်ပါဇန်နဝါရီ ၁၉၈၇။ အားဖြင့်နှောင်းပိုင်း ၁၉၈၈၊အားလုံးအဂျပန်နိုင်ငံခဲ့လွှင့် ၂၄ နာရီဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်အ Jobfinder ဝန်ဆောင်မှုဤအချက်မှာ၊အသံလွှင့်အကြား ၄am နှင့် ၅am၊နောက်ပိုင်းတွင် ၄:၃၀ မှ ၅:၃၀။ က ၂၀၀၀ အလယ်အားဖြင့်၊သို့သော်၊အားလုံးအ Jobfinder န်ဆောင်မှုခဲ့။
တိုကာလအတွက်အ၊ကြိုတင်စတင် ၂၄-နာရီအသံလွှင့်၊အ teletext ၾကလွှင့်၌-မြင်တိုင်မီစတင် အဖြစ်။ ဤစာမျက်နှာအားဖြင့်ချပ်များ၏သတင်းများနှင့်သတင်းအချက်ကတီ-ပါ။
ဖိုင်:Oracle gone in 1992.png
အဆုံး၏ပျောက်ဆုံးမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အပရိုဂရမ် teletext ဝန်ဆောင်မှုမှာ ၂၃:၅၆:၀၄ ငယ္စဥ္ဘ တွင် ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၂၊ဘယ်မှာအလယ်၌၊သာစာသား'ပရိုဂရမ်သွား ၁၉၇၈-၁၉၉၂'ပုံပေါ်နှင့်အတူအဖြူရောင်စတုရန်းအတွက်အလယ်ဗဟို။
ပရိုဂရမ်ပျောက်ကွယ်သွားဖို့စတင်ခဲ့မှာ ၂၃:၃၁:၀၉ အပေါ် ၃၁ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၂ နှင့်အတူ၊အပြင်နယ်စပ်ႈလှည့်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအချိန်အထိ ၂၃:၅၅:၅၅ အခါမှသာအဖြူရောင်စတုရန်းကျန်ရစ်ခဲ့သည်၊နှင့်အတူစာသား ပရိုဂရမ်သွား ၁၉၇၈-၁၉၉၂။ ဒါဟာအတော့ကိုဖြင့်အစားထိုးဝန်ဆောင်မှုမှ Teletext ည့္မယ္။ ပရိုဂရမ်ပြုမသယ်ရုပ်မြင်သံကြားစာရင်းထက်ကျော်လွန်၎င်း၏သန်းခေါင်အချိန်ပိတ်ပစ်အပေါ်နှစ်သစ်ကူးအကြို ၁၉၉၂။ ဒါဟာမျှသာဖော်ပြထားသည့်"၀၀:၀၀ ရဲ့အဆုံးပရိုဂရမ်၊ယခုအခါအိပ်မက်ဆိုးစတင်သည်။"။
ပန်းခြံရိပ္သာ၊အ teletext အခြေခံပြီးဆပ်ပြာအရာအပေါ်ပေါ်ထွန်းသောပရိုဂရမ်များအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာရေးသားသောရော်လောင်နှင့်စတိဗ် Regan။
↑ Metzgen, H (1982). "Key to the Information Revolution". Videoitex '82.
↑ Metzgen, H (1986). "New Teletext". Videoitex User '86.
↑ ၄-ဖုန္းမ်က္ႏွာ ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၉၊အရာလည်းပါဝင်သည်ခရစ္စမတ်ကျောင်း ၄-တီ
↑ ရုပ်သံလိုင်း ၄ Closedown င့္ ၄-ဖုန္းအပေါ်အမြင်စာမျက်နှာ ၂၈ မတ် ၁၉၉၄
↑ ရုပ်သံလိုင်း ၄ Closedown င့္ ၄-ဖုန္းအပေါ်အမြင်စာမျက်နှာ ၇ ဧပြီ ၁၉၉၆
↑ Robertson၊ Jason (31 December 2017)။ Changing the page။ 31 May 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ORACLE_(teletext)&oldid=403094" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၀၉:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။